Margarekha मजदुरहरुको प्यास मेटाउने डा.नितेश – Margarekha
मजदुरहरुको प्यास मेटाउने डा.नितेश
एस.एम.वि बाँके / डा.नितेश कुमार कनोडियाको कम उमेरमै ठुलो जिम्मवारी बोकेका छन् । सानो उमेरदेखी ठूलो जिम्मेवारी बोकेर उनी आफ्ना गन्तव्य यात्रा अगाडी बढाइहेका छन् । डा.नितेश कोही पनि छट्पटीरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । त्यस्ता कारुणीक अनि दर्दनाक दृश्य देखेपछि उनको मनले सहयोग गर्ने द्धढ इच्छा राख्छन् । अनि सहयोगी हातहरु अगाडी बढ्छन् उनका ।देशका विभिन्न संकटको समयमा चाहे भुकम्पको बेला होस् वा बाढि पहिरोले पिरोलिएका गरिबहरु हुन चाहे कोरोनाको माहामारी वा अस्पतालमा पैसाको अभावमा छट्पटाइरहेको विरामी होस् डा. नितेशले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
समाजसेवा गर्न सधै लागीपर्ने डा.नितेशले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट नेपाल फर्केका ति मजदुरहरुलाई सहयोग गर्न पुगेका थिए । केही दिन अगाडी परेको डा. नितेशको जन्मदिनको अवसर मान्दै उनले बुधवार घर फर्कनका लागि भारतबाट आई उखर्माउलो गर्मीमा जमुनहा नाकामा भोक, प्यासले छट्पटाइरहेका नेपालीलाई खानेकुरा बाँडेका थिए ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सहायक निर्देशक डा.नितेशले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर भारतबाट नेपाल फर्किएका नेपालीलाई ७ दिन सम्म नास्ता पानी खवाएका थिए । । ‘म कहिल्यै पनि अरुको दुःख हेर्न सक्दिन’ डा.नितेशले भने ‘त्यसैले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर ठुलो केही गर्न नसकेपनि सिमा रहेका नेपालीलाई भोक प्यास त मेटाउन सकुला भनेर नास्ता पानी वितरण गरिरहेको छु ।’ उनको यो कार्यलाई नेपालगन्जवासी र कोहलपुर बासीले प्रशंसा समेत गरेका छन् ।लामो यात्रपछि जमुनहा नाका आइपुगेका नेपालीहरु पानी समेत नपाएर ओठ मुख सुकाइरहेका हुन्छन् । डा.नितेशले जमुनाह नाकामा भारतबाट आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई प्रती ब्यक्ति एक बोतल पानी, चाउचाउ र बिस्कुट एक हप्ता सम्म नियामितरुपमा वितरण गरेका थिए । यसरी मानविय सेवा संगै एउटा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी पद धारणा गरेका डा. नितेशले हरेक समयमा प्रशंसिय काम गर्दै आइरहेका छन् । छोटो समयमै आफ्नो राम्रो पहिचान बनाउन सफल भएका डा. नितेश आगामी दिनमा पनी नेपाली भुमी नेपाली प्रति गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताए ।
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १७:०६ प्रकाशित